Global Voices teny Malagasy » Mpandraharaha ao Hong Kong manome vahana ny fotokevitra pro-demaokrasia · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 03 Janoary 2020 5:29 GMT 1	 · Mpanoratra Oiwan Lam Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Azia Atsinanana, Hong Kong (Shina), Fanoherana, Hevitra, Mediam-bahoaka, Politika, Toekarena sy Fandraharahàna
#米豬連  (ilay 🐷 mahafatifaty) tononina hoe “MiChuLin” izay toa mitovitovy feo amin'ny #Michelin , dia torolalan'ny SAKAFO TSARA ho an'ny 🇭🇰er hanondroana Fivarotana mavo (mpanohana ny hetsi-panoherana) & sy idifiana ireo tranombarotra manga (pro-#China )!
Tamin'ny 12 jona, raha nikasa handany na hitsipaka ilay volavolandalàna fampodiana-fandroahana olona efa nesorina amin'izao fotoana ny Vaomieram-Panaovandalànan'i Hong Kong, mihoatra ny zato ny orinasa madinika sy salasalany nanakatona ny fihariany  mba ahafahan'ny mpiasa ao aminy manatrika ny fihetsiketseham-panoherana. Notohanan'ny tompom-pihariana madinika anjatony maro  ihany koa ny fitokonana faobe voalohany tamin'ny 5 aogositra, niaraka tamin'ireo sendika maro, ka tafiditra amin'izany ny sendikàn'ny mpikarakara sidina amin'ny zotram-piaramanidina  [mg]. Ary matetika ny tompon'ny fiara azy manokana no manampy ny mpanao fihetsiketsehana hiala amin'ny toerana fanaovana fihetsiketsehana.
Nanampy ny mpanao fihetsiketsehana ara-bola ihany koa ny sarangan'olona antonony sy ny sehatry ny fihariana. Mano no nanome an'i 612 Fund  sy ny Spark Alliance  ohatra, mba hanolorana fanampiana ara-pitsarana, ara-panafody na hafa ho an'ireo naratra na nosamborina. Samy nahazo mihoatra ny 10 tapitrisa dolara amerikana ireo fikambanana roa ireo tao anatin'ny volana vitsivitsy tamin'ny alalan'ny fitia tsy mba hetra sy fanomezana an-dalambe.
Hatramin'ny volana aogositra, maro ireo restaurants nanohana ankarihary ireo mpanao fihetsiketsehana tamin'ny alalan'ny fanomezana sakafo maimaimpoana ho an'ny mpianatra, ary natsangana ny fivarotana antserasera HKongs Mall  hanolorana asa ho an'ireo nosamborina ka navotsotra tamin'ny alalan'ny fandoavana solontsazy.
Raha 9253 dolara HK  eo ho eo isambolana ny fandanian'ny tsirairay amin'ny ankapobeny tamin'ny taona 2018 (izany hoe manodidina ny 1.187 dolara amerikana), maro ny mino fa fitaovam-piadiana matanjaka mety hitondra fanovana ara-politika misy dikany ny hery aratoekarenan'ny tanàna.
Ao amin'ny Radio Free Asia ny mpanao fanadihadiana ara-politika Kay Lam nanazava  ny mety ho fiantraikan'ny faribolan-toekarena mavo:
Na izany aza, misalasala ny hafa fa mety hiafara amin'ny fanirerin'ny fihariana mavo ny faribolana mihataka amin'ny toekarenan'ny daholobe. Nanolotra  torohevitra vitsivitsy ho an'ny orinasa pro-demaokraty ny mpanao matoandahatsoratra vaovao ara-bola Chow Hin:
Iray amin'ny fivarotana mavo malaza indrindra ao Hong Kong ny Lung Mun Cafe, izay manana sampana dimy manerana ny tanàna. Nanomboka nanampy  ny mpanao fihetsiketsehana i Cheung Chun Kit tompony rehefa voasambotra ny zanakavavin'ny iray amin'ny mpiasa ao aminy. Tao anatin'izany fizotra izany izy lasa nifankazatra tamin'ireo tanora maro mpanao fihetsiketsehana. Misy sasantsasany henjana ny fifandraisana tamin'ny ray aman-dreniny ka lasa tsy mahita toerana aleha, ny hafa very asa, ary maro no miavo-tena.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2020/01/03/146076/
 nanakatona ny fihariany: https://www.scmp.com/news/hong-kong/politics/article/3013908/about-100-businesses-pledge-close-doors-allow-workers-join
 tompom-pihariana madinika anjatony maro: https://www.scmp.com/news/hong-kong/politics/article/3021336/hong-kong-braces-largest-citywide-strike-decades-14000
 sendikàn'ny mpikarakara sidina amin'ny zotram-piaramanidina: https://mg.globalvoices.org/2019/09/08/143014/
 9253 dolara HK: https://www.hk01.com/%E8%B2%A1%E7%B6%93%E5%BF%AB%E8%A8%8A/56731/%E9%A6%99%E6%B8%AF%E7%94%9F%E6%B4%BB%E8%B2%BB%E5%85%A8%E7%90%83%E7%AC%AC3%E4%BD%8D-%E6%AF%8F%E4%BA%BA%E6%9C%88%E5%9D%87%E9%96%8B%E6%94%AF9-253%E5%85%83-%E6%96%B0%E5%8A%A0%E5%9D%A1%E5%86%A0%E5%85%A8%E7%90%83
 Nanomboka nanampy: https://www.thestandnews.com/politics/%E5%B0%88%E8%A8%AA-%E7%94%B1%E6%B4%BE%E7%89%A9%E8%B3%87%E5%88%B0%E6%89%BE%E5%B7%A5%E4%BD%9C-%E9%BE%8D%E9%96%80%E5%86%B0%E5%AE%A4%E8%80%81%E9%97%86-%E4%B8%8D%E8%AB%87-%E7%B6%93%E6%BF%9F%E5%9C%88-%E6%88%91%E8%AA%AA%E7%9A%84%E6%98%AF%E8%89%AF%E5%BF%83%E7%A4%BE%E6%9C%83/